काठमाडौँ, चैत १६ गते । कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर आउनसक्ने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरे पनि फागुको अवसरमा आइतबार मापदण्ड अवलम्बन गरेको पाइएन ।
यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा थप चिन्ता भएको भन्दै मानिसले कोरोना सङ्क्रमणलााई सामान्य रूपमा लिनु उचित नभएको बताउनुभयो ।
डा. गौतमले पछिल्लो समय शिक्षण संस्था सङ्क्रमणको हटस्पट बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना सङ्क्रमण भई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अधिकांश कलेजमा पढाउने शिक्षक र होटलमा काम गर्ने कर्मचारी र तराईबाट रिफर गरी पठाइएका बिरामी रहेको जानकारी दिनुभयो । गौतमले ‘धेरै शैक्षिक संस्थामा अनिवार्य मास्कको लगाउने, हात धुने तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने काम नभएकाले समस्या